हेटौँडा-धुलिखेल विद्युतीय बस चलाउन ग्लोबल टेन्डरको तयारी - Pahilo Click
हेटौँडा-धुलिखेल विद्युतीय बस चलाउन ग्लोबल टेन्डरको तयारी
February 17, 2020 |Pahiloclick
हेटौँडा : वाग्मती प्रदेश सरकारले सरकारी स्वामित्वमा हेटौँडा—धुलिखेल विद्युतिय बस सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गरी प्रदेश राजधानी हेटौँडादेखि धुलिखेलसम्म विद्युतिय बस सञ्चालन गर्ने योजनालाई तीव्रता दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश यातायात निगम’ स्थापनाको तयारी अघि बढाइसकेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विद्युतिय बसको सञ्चालनले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले यस्ता गौरवका योजना छिटो नै सम्पन्न गरेर समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्नेछ । उहाँले सरकारले दुई वर्षभित्र समृद्धितर्फ जाने गौरवका योजनाको डिपिआर बनिसकेको र अबका वर्षमा तीव्रताका साथ निर्माण गरिने बताउनुभयो ।
फागुन दोस्रो हप्ताभित्र बिजुली बस खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर खोल्ने तयारी भइरहेको संयोजक निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने बित्तिकै विद्युतिय बस खरिद गर्न ग्लोबल टेन्डर निस्किने छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले दुई महिनाअघि प्रदेश यातायात निगम गठन सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले यही फागुन ६ गतेसम्म प्रदेशको भौतिक योजना मन्त्रालयलाई विद्युतिय बस सञ्चालनसम्बन्धी प्रतिवेदन दिने संयोजक निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदनमा बिजुली बस सञ्चालन प्रक्रिया, बस सञ्चालन हुने रुट, चार्जिङ स्टेशनलगायत विषय समेटिने र समितिअन्तर्गत दुईवटा उपसमिति गठन गर्दै बिजुली बस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेताको कोरोना परीक्षण नसकिँदा नेकपा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित
कुखुराको खुट्टा भाँचेको अभियोगमा चार दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा !
सिमरा सेज पीपीपी मोडेलमा बन्ने, आईएफसीले लगानी गर्ने
१० बजे राती हिंडदै हुनुहुन्छ? रातभरी थुनिनु होला !
प्रधानन्यायाधीश जबरा जव काठमाडौँ अदालतमा छड्के पुगे..